राजनीति Archives - Dna Nepal
समाज : हिमपात रोक्न हिउँमै बसेर पूजा
प्रमुख समाचार : आज रातिबाट मौन अवधि शुरु हुँदै, निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना होस् : निर्वाचन आयोग
राजनीति : कांग्रेसको कलह मिलाउन तीन नेताले गरे छलफल
समाज : प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्णता पायो
समाज : पकाएको भातमा प्लास्टिक चामल भेटियो, विक्री वितरणमा रोक
अर्थ/विकास : ‘आईसिपि’को उद्घाटन भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत गर्ने
Breaking News : हिउँले डुवेको अन्नपूर्ण बेस क्याम्प (फोटो फिचर)
पितृसत्तासँग लड्न सकिन, राजसंस्थाभन्दा ठूलो रैछः डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे ६ माघ २०७६, सोमबार ११:१२
काठमाडौं, माघ ६ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले पितृसत्तासँग लड्न नसकेको र यो राजसंस्थाभन्दा पनि जटिल रहेको बताएकी छिन् । संसद भवन नयाँबानेश्वरमा पदबाट राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कठोरतापूर्वक गाडिएको पितृसत्ताको..
काठमाडौं, माघ ६ । राष्ट्रियसभा सदस्यको माघ ९ गते बिहीबार हुने निर्वाचनको सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुँदैछ । निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम ४८ घण्टा अगाडी आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ,..
प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै शासन चलाईरहेका छन् : कांग्रेस सांसद रायमाझी ५ माघ २०७६, आईतवार १०:४१
काठमाडौं, माघ ५ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिकाप्रति आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली..
कांग्रेस सभामुखको जिम्मेवारी लिन तयार : देउवा १ माघ २०७६, बुधबार १०:०६
विराटनगर, माघ १ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी सभामुखको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सन्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सत्तारुढ दल नेकपालाई सभामुख चयनमा समस्या भए..
राजिनामा नदिने शिवमायाको अडान कायमै, कुन विकल्पमा जाला नेकपा ? २७ पुष २०७६, आईतवार ०९:०४
काठमाडौं, पुस २७ । उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजिनामा नदिने अडान फेरि दोहोर्याएकी छिन् । राजिनामा दिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल उवं नेकपा पार्टीले नै गरेको आग्रहलाई उनले अस्वीकार..
नेकपाले सभामुखको टुंगो लगाउन नसक्दा लगातार तीन पटक सूचना टाँस गरेर संसद बैठक स्थगित, अर्को बैठक माघ ६ मा
काठमाडौं, पुस २७ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ । योसंगै संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि लगातार तीन पटक सूचना टाँस गरेर संसद बैठक स्थगित भएको हो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी्भित्र सभामुखको उम्मेद्वार टुङ्गो लाग्न नसकेपछि..
उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन नेकपाको आग्रह २६ पुष २०७६, शनिबार १२:४८
काठमाडौं, पुस २६ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले रिक्त सभामुख पद नेकपामै रहनका..
सभापतिसँग पार्टी सन्चालनको योजना छैन्, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ : शशांक
चितवन, पुस २६ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवामा पार्टी सन्चालनको योजना नहुँदा समस्या आएको बताएका छन् । शनिबार चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने दाबी..
विप्लव नेकपामा आउनैपर्छ, नत्र ठूलो क्षति हुन्छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं, पुस २६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा समाहित हुन विप्लव समूहलाई आग्रह गरेका छन् । शनिबार काठमाडौमा विप्लब समूहका पोलिट्व्युरो सदस्य मोहन कार्की र ताम्सालिङ् इन्चार्ज सीता..
पुसभित्र पार्टी एकता नभए कुरेर बस्दैनौँ :अध्यक्ष थापा
भक्तपुर, पुस २६ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले यही पुस महिनाभित्र दुई पार्टीबीच एकता नभए कुरेर नबस्ने बताएका छन् । राप्रपा भक्तपुर जिल्ला समितिले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले पुसभित्र..
पोखरा, माघ ६ । युनाईटेड क्लवको आयोजना र कास्की जिल्ला वुद्धिचाल संघको सह आयोजनामा सोमबारदेखी पोखराको अमरसिंह माविको पुस्तकालयमा बुद्धिचाल प्रतियोगिता शुरु भएको छ । दशौ पोखरा महोत्सवको अवसरमा आयोजित उक्त.....
पोखरा, ५ माघ । पोखराको अमरसिंह चौरमा जारी पोखरा महोत्सव छैठौ दिन सम्म आइपुग्दा दर्शकको साथ पाउदै गएको छ । आगामी.....